ဂျင်နိုဆိုဒ်အာဏာရှင်အား ဖြုတ်ချခြင်း နိဂုံး | Civil Rights Movement For Burma
by rightsforburma | Oct 21, 2019 | Uncategorized |0comments
ကမ္ဘာကို မြန်မာက ဦးဆောင်တယ်
ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှေ့ထွက်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေပါ !
ဟုတ်ပါတယ် – ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပီး အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ရောင်စုံတော်လှန်ရေးတွေပေါ်လာတာတောင် ၁၉၈၉ မှ ဖြစ်လာတာမို့ မြန်မာထက် ၁ နှစ်နောက်ကျပါတယ် ။ မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေချိန်ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းရုံမက ကမ္ဘာ့ရှေ့မှာ ဦးဆောင်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးအခင်းရဲ့ အားသာချက်က မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံး ( ဗမာ အပါအဝင် လူနည်းစုတွေ + ဘာသာပေါင်းစုံ + လူတန်းစားပေါင်းစုံ ) က ဒီမိုကရေစီသန့်သန့်လေးတောင်းဆိုကြတာပါ ။ ဘယ်လူမျိုးစုကမှ ဗဟိုအစိုးရအားနည်းချိန်မှာ ခွဲထွက်မယ်လို့ အသံထုတ်ခဲ့တာမရှိပါဘူး ။ ဒါဟာ ဆိုဗီယက်ပြိုကွဲခြင်း ; ယူဂိုဆလားဘီးယားပြိုကွဲခြင်းတို့နဲ့ အကြီးအကျယ်ကွာဟတဲ့ အချက်ဖြစ်ပီး မြန်မာလူထုရဲ့ ဉာဏ်ကျယ်မှုလို့တောင် ပြောရမှာပါ ။
လူထုက ဉာဏ်ကျယ်သလောက် အာဏာရှင်တွေနဲ့ အတိုက်အခံဆိုသူတွေက ဉာဏ်တိမ်လွန်းပါတယ် ။ စစ်အာဏာရှင်ကတော့ အာဏာရှင်ဇရိုက်အတိုင်း လူ ၁ သောင်းခွဲလောက်ကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပီး နှစ် ၂၀ လောက်ခွေးဇာတ်ခင်းသွားပါတယ် ။
စွပ်စွဲလိုခြင်းမဟုတ်ပေမဲ့ – အဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ခွေးဇာတ်မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သူတွေကတော့ မြန်မာအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားဆိုသူတွေပါ – ” လူ ၁ သောင်းခွဲခန့် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပီး အာဏာယူခဲ့ကာ ; ကရင်နယ်မြေမှာ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုပေါင်းစုံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရ ” ကို နိုင်ငံတကာတရားစီရင်မှုယန္တယားနဲ့ အရေးယူဖို့ ထိထိရောက်ရောက် အားမထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
စစ်အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရေးဆိုတဲ့ မရေရာမသေချာတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတခုနဲ့ ရေစုံမျှောလိုက်ရင်း မြန်မာပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်သောင်ဘယ်ကမ်းဆိုက်မယ်ဆိုတာ မရေရာမသေချာဖြစ်နေခဲ့ရတာ အခုထိပါပဲ ။ စစ်အာဏာရှင်တွေကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလို တဖက်သတ်အသာစီးရတဲ့ ဥပဒေလက်နက်မျိုးကို တည်ဆောက်ပီး တိုင်းပြည်ကို pseudodemocracy = ရွှေရည်စိမ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ အကန့်အသတ်မရှိအုပ်ချုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်သွားနိုင်ပါပီ ။ ဘယ်သူတက်တက် – ဘယ်သူအစိုးရဖြစ်ဖြစ် အာဏာရှင်စနစ်က တရားဝင်ရှင်သန်ခွင့်ရသွားခဲ့ချေပီလား !
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ သမိုင်းအသစ်ရေးခဲ့ပါပီ – မြန်မာပြည်က အာဏာရှင်တွေဟာ ရိုးရိုးအာဏာရှင်တွေမဟုတ် ; ဂျင်နိုဆိုဒ်အာဏာရှင်တွေဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာ တံဆိပ်ကပ်နိုင်ခဲ့ပါပီ ။
၈၈ အရေးအခင်းအပီး နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့် အိယောင်ဝါးလိုက်နေတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အဆုံးသတ်ဖို့ အချက်ပေးအမြောက်သံ ဖောက်တော့မှာပါ ။ သိပ်မကြာခင်ကာလမှ နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးတော်ကနေ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကို သမ္မာန်စာထုတ်ဆင့်ပါလိမ့်မယ် – သမ္မာန်စာနဲ့ ဖမ်းဝရမ်းဟာ ICC လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အရ အဆင့်အတူတူပဲမို့ ဖမ်းဝရမ်းထွက်လာခြင်းဟာလည်း ဆက်တိုက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။ ဖမ်းဝရမ်းကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မဲ့ executive power တွေကိုလည်း အသင့်တည်ဆောက်ပီးပါပီ ။ တရားခံတွေကို အချိန်အတိုအတွင်း အမြန်ဆုံးဖမ်းရမှာဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ဌေးကိုယ်တိုင်က ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာကတည်းက ပြောပီးသားပါ ။
ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံမှာ ကမ္ဘာကို မြန်မာက ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ပန်းဝင်အလွန်နောက်ကျနေပါတယ် – အခုအချိန်ဟာ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲနွှဲပီး ပန်းဝင်ရမဲ့အချိန်ပါ ။
ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘယ်ပါတီ အာဏာရရေး ကျနော်တို့စိတ်မဝင်စားပါဘူး ။ ဘယ်သူအာဏာရရ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးနဲ့ လူနည်းစုအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဥပဒေတွေပြဌာန်းဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ် ။
ဒီအတွက် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းက အသာစီးရယူထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို ဖျက်ကိုဖျက်သိမ်းရမှာပါ ။ ICC ရဲ့ ဖမ်းဝရမ်းနဲ့ အတူ ဂျင်နိုဆိုဒ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကံကြမ္မာကို နှောင်းတည်းလိုက်ပါပီ ။ ဒီအချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ခွင့်သာခိုက်မှာ ရုန်းကန်ကြဖို့လိုပါတယ် ။ မရုန်းကန်ရင်တော့ ကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေက ၁၉၈၈ တုန်းကလို ဂျင်နိုဆိုဒ်အာဏာရှင်စနစ်အောက် ခေါင်းငုံ့ခံနေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး – ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ခွဲထွက်သွားကြပါလိမ့်မယ် ။
ကျနော်တို့ဟာ မေတ္တာတရားဆိုတဲ့ အခြေခံနဲ့ ချည်းကပ်ပါတယ် ။ လူမျိုးစုအလိုက် ; လူ့အဖွဲ့အစည်းအလိုက် တိုးတက်တာကိုလိုလားပါတယ် – ကူညီဖို့လည်း အသင့်ပါ ။ မြန်မာပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်လည်း အာဏာရှင်စနစ်ကို ချေမှုန်းရာမှာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တတ်ဖို့လိုပါတယ် ။
အမှန်တော့ ဆာဘ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုထက် မြန်မာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းက ပိုပီး အစဉ်အလာရှိပါတယ် ။ ကိုယ်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အစဉ်အလာကို နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးလမ်းကြောင်းမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြင့် မြန်မာပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအတွက် အကျိုးရှိမဲ့ကာလကို ရောက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပေးလိုတဲ့အတွက် ဒီစာကိုရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။